QM:- daadadkii ku dhuftay bartamaha Soomaaliya ku dhawaad 1…
Hay’ada Qaramada Midoobay ayaa warbixin ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay ku-dhawaad hal milyan oo qof ay waxyeelo ka soo gaareen daadadkaasi, oo ay ku barakaceen 400,000 oo qof.
Qaramada Midoobay waxa ay ka digtay suurto-galnimada Cuddurada Faafa oo ka dilaaca Gobaladaasi, sababo la xiriira buuxa xad-dhaafka ee dadka Barakacayaasha ee baadigoobaya Gabaad Ku-meel-gaar ah.
Warbixinta waxaa kaloo lagu sheegay inay ugu yaraan 24-qof ku geeriyootay daadadka ku dhuftay magaallooyinka Beled-weyne iyo Jowhar.
Warbixinta QM waxaa lagu muujiyey in qiyaastii 40% dadka ku nool magaalladda Jowhar ay ka barakaceen guryahooda, sababo la xiriira Fataahaadda Webiga Shabelle, sida laga soo xigtay Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka ee Dowlad-gobaleedka Hirshabelle.
Halkaan ka aqri warbixinta Qaramada Midoobay ee daadadka Soomaaliya.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Webiga Jubb uu si aad ah kor ugu kacay bilowgii usbuucii hore gaar ahaan degmooyinka Doolow, Luuq iyo Baardheere, oo dhammaantood ku yaal gobolka Gedo ee Koofurta Soomaaliya.